जान्नुस् पशुपतिनाथ मन्दिरलाई किन महादेवको मन्दिर भनिन्छ ? - Hamro Abhiyan
जान्नुस् पशुपतिनाथ मन्दिरलाई किन महादेवको मन्दिर भनिन्छ ?
हामी सबैलाई थाहा छ कि भगवान शिव धेरै नाम छन् । त्यही धेरै नामहरुको बिचमा एउटा यस्तो नाम छ सायदैं त्यसका बारेमा तपाईलाई जानकारी हुनसक्छ । हो, महादेवसँग हरेक नामसँग सम्बन्धित केहि कथाहरू छन्। जस्तै उनलाई निलकंठ भनिन्छ, किनकि उनले त्यो बेलामा समुन्द्रमा फैलिएको सबैं विष आफुले सेवन गरेर समस्त प्राणिहरुको रक्षा गरेका थिँए ।
तर जसले आफ्नो स्वार्थ र रिस पूरा गर्ने सोचले शिव भगवानको कुरालाई इन्कार गरे भगवान शिवले आफ्नो अस्त्र प्रयोग गरेको विश्वास रहँदै आएको छ । भगवान शिव को यो हतियार केवल कल्याण को लागि हो,यसकारण यसलाई शुभ वज्र भनिन्छ। मानिसहरु जस्तै शिव भगवानको दिलमा जनवारहरु प्रति पनि उत्तिकैं प्रेम र सद्भाव रहेको थियो । यस कारण उनले पशुपति नाम पाए। यसैले उनलाई पनि पशुपतिनाथ भनिन्छ। जनता लाईभबाट साभार
भ्र’ष्टाचार वि’रोधी गाडी मैले सिंहदरवार भित्र छि’राएकोछु, अब गाडी भरिन्छ,…
आइतवारको दिन सूर्य देवको यि १२ मन्त्रको उच्चारण सहित उपासना गर्नाले मिल्नेछ चमत्कारीक…